PEACEFUL PA: December 2012
ဘုရားသခင် ဂတိတည်တော်မူပုံ How Does God Keeps His Promises?
By Kurt De Haan
Former Managing Editor of “OUR DAILY BREAD”
ဂတိတော်တွေကို ဘာကြောင့် သံသယဖြစ်ကြရသလဲ?
၁။ လွဲမှားတဲ့ မြော်လင့်ချက်တွေကြောင့် Faulty Expectations
ကိုယ်ထင်တဲ့နည်းအတိုင်း ဘုရားသခင် လုပ်ပေးမယ်လို့ မြော်လင့်နေတာဟာ မှားပါတယ်။ ကိုယ့်အထဲက အရင်ပြောင်းလဲမှ ပြင်ပအခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲမှာကို သတိရပါ။ လူ့အမြင်က တိမ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က အဝေးကို လှမ်းမြင်နေပါတယ်။ လူက အပေါ်ယံ၊ လက်ရှိ အခြေအနေကိုဘဲ မြင်ပါတယ်။
ပြဿနာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘုရားသခင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာ မသိတတ်ပါဘူး။
၂။ အလွဲအနက်ယူ၊ လိုရာဆွဲသုံးမှုတွေကြောင့် Faulty Interpretation and Applications
ကျမ်းစာကို ကိုယ်လိုတဲ့ တပိုင်းလောက်ပဲ ကောက်ယူတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။ ကျမ်းစာထဲက ဂတိတော် ရှိသမျှဟာ ကိုယ့်အတွက်လို့ပဲ မမှတ်ရပါဘူး။ သီးသန့် တဦးတယောက်၊ လူမျိုးတမျိုး (သို့) ခေတ်တခေတ်
ထဲက လူတွေကို ပြောထားတာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၃။ လွဲမှားတဲ့ ခံစားချက်တွေကြောင့် Faulty Feelings
ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရင် လူက ဘုရားကို အပြစ်တင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်က ကိုယ့်ကို နားလည်မှု လွဲမှားစေတာပါ။
၄။ လွဲမှားစွာ အမှတ်ရနေတာတွေကြောင့် Faulty Memory
လူမှာ တနေ့တာမှတ်စရာ အသေးအမွှါးတွေက များလွန်းတော့ အရင်က ကိုယ့်အပေါ် ဘုရားသခင် ကူမတာတွေ၊ သစ္စာစောင့်တာတွေ မေ့နေတတ်တယ်။ အဲဒီတော့နောင်မှာလည်း ဘုရားသခင် သစ္စာရှိနေ
ဂတိတော်တွေကို ဘယ်လိုစောင့်ထိန်းတော်မူသလဲ? How Does God Keep His promises?
လူပေးတဲ့ဂတိတွေဟာ ပျက်တတ်ပေမယ့် ဘုရားက သူ့ဂတိကို စောင့်ထိန်းပါတယ်။ စောင့်ထိန်းပုံကတော့ ……
၁။ သူ့ဘောင်အတွင်းမှာသာ On His Terms
၂။ ရည်ရွယ်သူကို To His intended Audience
၃။ ဘုရားနည်းလမ်းအတိုင်း By His Methods
၄။ အချိန်ကျမှ In His Time
ကုန်ပစ္စည်းတခုရဲ့ အာမခံသက်တမ်းဟာ သူ့နှစ်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းကို သုံးစွဲရာမှာလည်း သူ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းသာ သုံးရပါတယ်။ ဘုရားဂတိတော်တချို့က သူ့အချိန်ကာလ တခုအတွင်းမှာသာ ဖြစ်သလို၊ ကိုယ့်ဖက်က လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်ရင် ဂတိတော်ကို မခံစားရပါဘူး။ တချို့ဂတိတော်တွေကတော့ အချိန်ကာလနဲ့ အရည်အချင်းတွေ မလိုပါဘူး။ ဆာလံ ၁၀၀ ကို ကြည့်ပါ။
“ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သိမှတ်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊ ငါတို့၏အရှင် ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏လူ ဖြစ်ကြ၏။ အထံတော်၌ ကျက်စားသော သိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏။- ကျေးဇူးတော်ကြီးပါသည်ဟု ဝန်ခံလျက်၊ တံခါးတော်တို့ကို၎င်း၊ ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းလျက် တန်တိုင်းတော်တို့ကို၎င်း ဝင်ကြလော့။ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်း၍ နာမတော်ကို ကောင်းကြီးပေးကြလော့။ - အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲရှိ၍၊ သစ္စာတော်သည် ကာလအဆက်ဆက်တည်လေသတည်း။” (ဆာလံ ၁၀၀း ၃- ၅)
တချို့ ဂတိတော်တွေကတော့ အခုလို အမြဲမတည်ဘဲ၊ အရည်အချင်းတခုခု လိုနေတတ်ပါတယ်။
လိုတတ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေက ….
အာဒံနဲ့ ဧဝကို ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာ စကားနားထောင်မှ အသက်ရှင်မယ်။ နားမထောင်တဲ့နေ့မှာ သေရမယ်လို့ ဂတိထားခဲ့ပါတယ်။ (ကမ္ဘာ ၂း ၁၆- ၁၇)
သိနာတောင်မှာ မောရှေနဲ့ ဣသရေလလူမျိုးကို ပညတ်တရားပေးရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ စကားနားထောင်မှ လူမျိုးတော်လို စောင့်ရှောက်မှာပါ။ (ထွက်မြောက်ရာ ၁၉း ၃- ၆) ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှာလည်း ရုပ်ထုကိုရှောင်မှ၊ ဘုရားမေတ္တာကို မြင်ရပါမယ်။ (ထွက်မြောက် ၂၀း ၄- ၆) ဘုရားနာမကို မရိုသေရင် အပြစ်လို့ မှတ်တော်မူပါတယ်။ (အငယ် ၇)။ မိဘကိုရိုသေရင်တော့ အသက်ရှည်ပြီး ကောင်းစားပါမယ်။ (အငယ် ၁၂) ။ ထွက်မြောက်ရာ ၂၃း ၂၀-၃၃ မှာ စကားနားထောင်ရင်- ရန်သူဘေး၊ အနာရောဂါဘေးတွေကနေ ကယ်တင်မယ်လို့ ဂတိထားပါတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ တွေရတဲ့ အရည်အချင်း လိုတဲ့ Conditional Promises တချို့ကတော့ …….
#ကောင်းကင်အရာတွေကို စိတ်စွဲလန်း ရှာဖွေရင်၊ လောကအရာ ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်။ (မဿဲ ၆း ၂၅- ၃၄)
#ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး၊ မာနတ်ကို ဆီးတားရင်- မာနတ်ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။ (ယာကုပ် ၄း ၇)
#ရသမျှကို ကိုင်စွဲပြီးနေရင်၊ မရွေ့လျော့၊ မတိမ်းယိမ်းပဲ နေလိမ့်မယ်။ (၂ပေ ၁း ၃- ၁၁)။
#ဖေါ်ပြတောင်းပန်သမျှကို ခွင့်လွှတ်တော်မူမယ်။ (၁ယော ၁း ၉)။
#အလိုတော်နဲ့ညီတာတွေတောင်းရင် ရကြလိမ့်မယ်။ (၁ယော ၅း ၁၄- ၁၅)။
အရည်အချင်းမလိုတဲ့ ဂတိတော်တွေ …..
လူဖက်က ဘာအရည်အချင်းမှ မလိုပဲ၊ တည်နေမယ့် ဘုရားဂတိတော်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Unconditional Promises တချို့ကတော့ ..…
*နောက်တဖန် ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို ရေမလွှမ်းတော့ဘူးလို့ နောဧကို မိန့်တော်မူပါတယ်။ (ကမ္ဘာ ၉း ၈-၁၇)
*အာဗြဟံကို သားတယောက်၊ လူမျိုးကြီးတမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်တပြည် ဂတိပေးထားပါတယ်။ (ကမ္ဘာ ၁၅)
*ဒါဝိဒ်ရဲ့ သားမြေးတွေ အစဉ်အဆက် နန်းထိုင်ရမယ်။ (၂ရာ ၇း ၁၆)
*ဣသရေလနိုင်ငံကို ပြန်တည်ထောင်ပေးတော်မူမယ်။ (ယေရမိ ၃၀- ၃၃)။
*သခင်ယေရှုဟာ ကောင်းသူတွေကို ဆုပေးပြီး၊ ဆိုးယုတ်သူတွေကို ဒဏ်ပေးဖို့ တခါပြန်ကြွလာမယ်။ (မဿဲ ၁၆း ၂၇။ ၂၅း ၃၁- ၄၆)။
*မာနတ်က အသင်းတော်ကို မနိုင်ရဘူး။ (မဿဲ ၁၆း ၁၈)။
*သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူတိုင်း အကယ်ခံရပြီး၊ ထာဝရအသက်ရတယ်။ (ယော ၆း ၃၅- ၄၀)။
ဂတိတော်တွေဟာ တဝက်တပျက်ပဲ ပြည့်စုံတယ်လို့ ရှိတတ်သလား?
ရှိတတ်ပါတယ်။ လူ့ဖက်က လိုအပ်ချက် မပြည့်စုံတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဣသရေလလူမျိုးတွေ ခါနန်ပြည်ဝင်တော့ ခါနန်လူမျိုးတွေကို တဝက်တပျက်ပဲ နှင်ထုတ်တော့၊ ပြည်တော်ကိုလည်း တဝက်တပျက်ပဲ အမွေခံရပါတယ်။ ကယ်တင်ရှင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ ဓမ္မဟောင်းဂတိတော်တွေဟာလည်း သခင်ယေရှု ပထမအကြိမ် ကြွလာတော့ တဝက်ပဲ ပြည့်စုံပြီး၊ တချို့ ဂတိတော်တွေက နောက်တခါ
ကြွလာမှ ပြည့်စုံမှာပါ။ ပထမအကြိမ် ကြွလာတော့ ဝေဒနာခံတဲ့ အစေခံကျွန်လိုလာပြီး၊ နောက်တခါ မှာတော့ ဘုရင်လို လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုတ္တံကျမ်းကို ဂတိတော်လို့ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကောက်ယူနိုင်ပါသလား?
သုတ္တံကျမ်းရဲ့ ဂတိတော်တွေက ကျယ်ပြောတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာ အသက်ရှင်ရင် အကျိုးရမှာ ဖြစ်သလို၊ ဆိုးသွမ်းရင်တော့ ဒုက္ခတွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရဲ့
ဘောင်အတွင်းနဲ့ ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ သွန်သင်ချက်ကို အလေးမထားပဲ အနက်ဖွင့်ရင်လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
သုတ္တံကျမ်းက လက်တွေ့ကျင့်ကြံဖို့ ပညာတရားကို သင်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ။ အကြမ်းဖက်သမားဟာ ပြန်အကြမ်းဖက်ခံရပြီး သေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ ဘုရားသခင်ဟာ တချို့ကိစ္စတွေကို နောက်ဆုံးသောနေ့မှသာ စီရင်ဖို့လည်း သည်းခံနေနိုင်ပါတယ်။
ပညာတရားကို လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးရင်- ချမ်းသာမယ်၊ မဆင်းရဲ၊ မငတ်မွတ်ဘူးလို့ သွန်သင်ပါတယ်။ (သုတ္တံ ၁၀း ၃) ။ ဒါက စိုက်တဲ့အတိုင်း ရိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ General Principles ယေဘုယျသဘောနဲ့တော့ ကိုက်ပါတယ်။ (ဂလာတိ ၆း ၇)။ ဒါပေမယ့် လူ့ဘဝက အမြဲတမ်း တရားသေ ကြိုပြီးတွက်ဆလို့ မရတတ်ပါဘူး။ Life is not always so predictable. ဒါကို ယောဘ၊ ဒါဝိဒ်၊ ရှောလမုန်နဲ့ ရှင်ပေါလုတို့ရဲ့ အသက်တာမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အတော်များများမှာ ဘုရားသခင်က အခုဘဝထက်၊
နောင်တမလွန်အကျိုးကို ပိုပေးချင်လေ့ ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတ္တံကျမ်းက လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့ ပညာကိုသာ ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားစရာကတော့ ဘုရားက ဂတိတည်ပြီး၊ လူဖက်က အရည်အချင်း မပြည့်ဖြစ်တတ်တဲ့ အချက်ပါပဲ။
ကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ နို့နဲ့ပျားရည်စီးတဲ့ ခါနန်ပြည်အကြောင်းရောက်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှား သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း မလုပ်ရဘဲ၊ အသီးအနှံတွေ ပေါများတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ သင့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက ဣသရေလလူမျိုးတွေကို တချိန်က ပေးခဲ့တဲ့ ဂတိပါ။ ဒါကြောင့် တချို့ ဂတိတော်တွေက ရည်ရွယ်သူတွေအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဆာလံ ၁၄၅ ကိုရေးတဲ့ ဆာလံဆရာဟာ တချို့ဂတိတော်တွေဟာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး၊ တချို့ဂတိတော်တွေက လူတချို့ အတွက်သာ ဖြစ်တာကို ရိပ်မိခဲ့ပါတယ်။
“ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းးသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုချင်သော သဘောရှိ၍၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှတို့ကို သနားစုံမက်တော်မူ၏။” (ဆာလံ ၁၄၅း ၉)
“လက်တော်ကို ဖွင့်၍၊ အသက်ရှင်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို ရောင့်ရဲစေတော်မူ၏။”
(အငယ် ၁၆) “ထာဝရဘုရားသည် ပဌနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပဌနာပြုသောသူ အပေါင်း တို့၏ အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။ - ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏ အလိုကိုပြည့်စုံစေတော်မူ၏။ ထိုသူတို့ ၏ အော်ဟစ်ခြင်းကို ကြား၍ ကယ်တင်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည် ကြည်ညိုသော သူအပေါင်း တို့ကို စောင့်မတော်မူ၏။ မတရားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကား၊ ဖျက်ဆီးတော်မူမည်။” (အငယ် ၁၈- ၂၀)
ဂတိတော်တခုကို မကိုင်စွဲခင်မှာ အဲဒီဂတိဟာ ကိုယ့်ကို ပြောသလား၊ မပြောဖူးလားဆိုတာ သိဖို့လိုအပ် ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဂတိတော်တွေ ရှိသလို၊ ယုံကြည်သူအတွက် အရည်အချင်းလိုတာနဲ့ အရည်အ ချင်း မလိုတဲ့ Conditional and Unconditional ဂတိတော်တွေ လည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ဂတိတော်တွေ ကတော့ ဣသရေလလူမျိုးအတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ ဒီ့အပြင် တချို့ဂတိတော်တွေက ခေတ်တခေတ်က လူတချို့အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတယောက်တည်းကို ပေးခဲ့တဲ့ဂတိတော်ကို ကိုယ့်အတွက် မူအဖြစ်သုံးလို့မရဘူးလား?
တခါတလေ ရပါတယ်။ တခါတလေ မရပါဘူး။ ဂတိတော်က မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ဘုရားဂုဏ်တော်နဲ့ ဆက်စပ်နေရင် ရပါတယ်။ (ယာကုပ် ၁း ၁၇) ဥပမာ၊ သခင်ဘုရားက ရှင်ပေါလုကို “ငါ့တန်ခိုးသည် အားနည်းခြင်းအဖြစ်၌ စုံလင်တတ်သည်” (၂ကော ၁၂း ၇-၁၀) ရှင်ပေါလုရဲ့ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဆူးကို ရည်ရွယ်တာပါ။ ဒီအချက်က ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို သိတဲ့သူတိုင်းအတွက် ဘုရားတန်ခိုးခံစားရဖို့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကျမ်းချက်တချက်ပါ။ ဧဖက် ၁း ၁၉။
ဒါပေမယ့် ယောရှုကိုပေးတဲ့ “သင်တို့နင်းသမျှသော မြေကို သင်တို့အား ငါပေးမည်” ဆိုတဲ့ ဂတိကိုတော့ တခြားသူတွေ ဆွဲသုံးလို့ မရပါဘူး။ (ယောရှု ၁း ၃)
ဟေရှာယ ၅၅ မှာ … “ငါ၏အကြံအစည်သည် သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့် မတူ။
ငါ၏အကျင့်သည်လည်း သင်တို့၏ အကျင့်နှင့် မတူ။- မိုဃ်းကောင်းကင်သည် မြေကြီးထက်သာ၍ မြင့်သကဲ့သို့ ငါ၏အကျင့်သည် သင်တို့၏ အကျင့်ထက်၎င်း၊ ငါ၏အကြံအစည်သည် သင်တို့၏အကြံအစည်ထက်၎င်း သာ၍မြင့်၏။ ” (အငယ် ၈- ၉)
ဂတိတော်ကို ဘယ်လို မြင်သာတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံစေပါသလဲ?
ကျမ်းစာထဲက ဂတိတော်အများစုနဲ့ ကြိုတင်ဟောပြောချက်တွေက သခင်ယေရှု ကြွလာခဲ့တာနဲ့ကို ပြည့်စုံပြီးသွားပါပြီ။
နားလည်ရခက်ခဲတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ဂတိတော်တွေ ပြည့်စုံစေတာ ရှိသလား?
ကယ်တင်ရှင်ကြွလာမယ်လို့တော့ မြော်လင့်သူတွေ အနည်းအကျဉ်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုက ဂျူးလူမျိုးနဲ့ တပါးအမျိုးသားတွေကိုပါ တပြိုင်နက် ကယ်မယ်ဆိုတာတော့ လူတွေ သိပ်နားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
မမြော်လင့်တဲ့နည်းနဲ့ ဂတိတော်တွေ ပြည့်စုံတာ ရှိသလား?
တခါတရံလည်း နားလည်ရခက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံစေတတ်ပါတယ်။ ဖါရောဘုရင်ရဲ့ စစ်တပ်ကို ပျက်စီးစေပုံ (ထွက်မြောက်ရာ ၁၄)၊ ယေရခေါမြို့ရိုး ပြိုကျတာ (ယောရှု ၆)၊ အာရှုရိစစ်သား ၁၈၅,၀၀၀ ကို ထာဝရဘုရားရဲ့ ကောင်းကင်တမန်က ဒဏ်ခတ်တာ (၄ရာ ၁၉း ၃၅)၊ မြော်လင့်မထားတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းနည်းတွေပါ။
ဝိညာဉ်သဘောအရ ပြည့်စုံသွားတဲ့ ဂတိတော်တွေ ရှိသလား?
တချို့က ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းနေရင် မဆင်းရဲဘူး၊ မဖျားနာဘူး၊ ဒုက္ခမတွေ့ဘူးလို့ ထင်တတ်ပါတယ်။ ယောဘကို ကြည့်ပါ။ မကျန်းမာဘူး၊ ဆင်းရဲနေတယ်၊ ဒုက္ခတွေ့နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတွေက ကြွယ်ဝပါတယ်။
ဟေရှာယ ၄၀း ၃၁ က “ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်သောသူတို့မူကား၊ အားပြည့်ကြလိမ့် မည်။ ရွှေလင်းတ ကဲ့သို့ မိမိတို့ အတောင်ကို အသစ်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ ပြေးသော်လည်း မပင်ပန်း၊ ခရီးသွားသောအခါ မမောကြရ။” ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဝိညာဉ်ခွန် အားပြည့်တာကို ပြောတာပါ။
မူကြိုကလေးအရွယ်တွေက အချိန်ကို နားမလည်သေးဘူး။ နောက် ၂ ပတ်ကြာရင် တိရစ္ဆာန်ရုံကို သွားမယ်ဆိုလို့ကတော့ နေ့တိုင်း တိရစ္ဆာန်ရုံကို သွားတော့မလားလို့ ၂ ပတ်လုံးလုံး မေးနေတော့မှာပဲ။ လူကြီးတွေလည်း ဘုရားအချိန်ကို မစောင့်နိုင်ဘူး။ နှစ်ချီပြီး မကြာစေချင်ဘူး။ တရက်၊ ၂ ရက်အတွင်း ပြည့်စုံချင်ကြပါတယ်။
ဒေသနာဆရာက “ခပ်သိမ်းသော အမှုအရာတို့သည် မိမိတို့ အချိန်ရှိ၏။” (ဒေသနာ ၃း ၁) ဘုရားမှာ အချိန်ဇယား ရှိတယ်။ သူ့အချိန်ဇယားက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ စောင့်ဆိုင်း တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အာဗြဟံနဲ့ စာရာကို သားပေးမယ်ဆိုပေမယ့် နှစ်အတော်ကြာအောင် မပေးသေးပါဘူး။ အသက်ကြီးမှ ပေးတာပါ။ ဒါဟာ နှေးတယ်ဆိုတာထက် အချိန်ကျမှ ပေးတာပါ။
ဂတိတော်နှေးနေရင် လူတွေ ဘယ်လို တုန့်ပြန်ကြသလဲ?
တချို့က သည်းခံခြင်းတိုးပွါးလာတယ်။ တချို့က ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်ထိန်း ထားနိုင်ကြ တယ်။ တချို့ကတော့ သူတပါး မြော်လင့်နေတာကို ကဲ့ရဲ့တတ်ကြတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ အာဗြဟံမှာလည်း သံသယဝင်တဲ့အချိန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးသည် စာရာ အိုမင်းလာတော့ ဘုရားဂတိပြည့် စုံသွားအောင် အာဗြဟံနဲ့ စာရာက လူ့ညဏ်နဲ့ ထွင်လိုက်ကြပါတယ်။ ဣရှမေလ မွေးလာ ပါတော့တယ်။ (ကမ္ဘာ ၁၆)။ ဒါပေမယ့် သူ့အချိန်ကျတော့ သားဣဇက်ကို အံ့ဩထူးဆန်းဖွယ်ရာ မွေးဖွါး လာစေပါတော့ တယ်။ (ကမ္ဘာ ၂၁း ၁- ၇)
ဂတိတော်အကြောင်း အတော်အတန် လေ့လာခဲ့ပါပြီ။ သမ္မာကျမ်းစာကို အနက်ဖွင့်ရာမှာ ……..
၁။ ကျမ်းစာပိုဒ် context ရဲ့ ဆိုလိုရင်းနဲ့ ညီရပါမယ်။ သူ့ရှေ့က စာပိုဒ်၊ သူ့နောက်က စာပိုဒ်တွေနဲ့ သဘောတူရပါမယ်။
၂။ သမ္မာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်း context နဲ့လည်း ကိုက်ညီရပါမယ်။
သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဂတိတော်ကတော့ “ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါး တည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့် တိုင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏” (ယော ၃း ၁၆) ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီကတိတော်က အခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့ conditional promise ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေက “ယုံကြည်” ရပါမယ်။ “ယုံကြည်”ရင် အခမဲ့လက်ဆောင် ထာဝရအသက်ရပါတယ်။ ပျက်စီးခြင်း၊ အပြစ်စီ ရင်ခြင်း မခံရတော့ပါဘူး။ တခါမှ ကယ်တင်ရှင်ကို မယုံကြည်၊ လက်မခံ ရသေးရင် အခုလက်ခံလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဂတိတော်ကတော့ “ထာဝရအသက်” ရပြီး၊ ကောင်းကင်ဝင်စားခွင့်ရတာပါပဲ။ #
Posted by Papa at 3:39 PM
Labels: ခွန်အားယူစရာ, ဆောင်းပါးတို
ဘုရားသခင် ဂတိတည်တော်မူပုံ How Does God Keeps His P...